Zahao raha afaka ny iPhone-nao
Raha tianao izany fantaro raha mihidy ny iPhone-nao, eto dia manolotra serivisy anao izahay hanamarina izany miaraka amin'ny antoka feno. Fantaro raha ianao Maimaimpoana ny iPhone na tsia amin'ny fomba azo antoka indrindra.
Ny fahalalana ny satan'ny rohy iPhone na iPhone tadiavintsika hananana dia zava-dehibe mba hanovana ny orinasan-telefaona amin'ny ho avy miaraka amin'ny fikasana hitahiry ny faktiorantsika, na fotsiny ho an'ny ny fahaizan'ny tsy mifandray mandrakizay amin'ny orinasa. Rehefa manaiky karatra avy amina karazana orinasa ny iPhone dia fantatra amin'ny anarana hoe iPhone "afaka" izany hoe afaka mampiasa karatra SIM avy amina mpandraharaha isika raha tsy misy karazana fetra sy amin'ny fomba mora indrindra.
Ahoana no hahalalana raha maimaim-poana ny iPhone
Noho izany, raha hividy fitaovana iPhone faharoa isika, dia fantatry ny mpividy amin'ny ho avy fa maimaim-poana ny iPhone na ampifandraisina amin'ny orinasan-telefaona iray, satria raha tsy izany dia tsy ho azon'izy ireo ampiasaina izany amin'ny fomba hafa. karatra mpandraharaha amin'ilay iray mifandray amin'ny iPhone. Noho izany, dingana iray lehibe alohan'ny fividianana iPhone dia alao antoka fa maimaimpoana izany ary azontsika ampiasaina amin'ny orinasan-telefaona tadiavintsika izany. Raha te hahalala raha voahidy ny iPhone dia manolotra serivisy mora sy haingana ho anao izahay, tsy maintsy mampiditra ny angon-drakitra voalaza ao anaty endrika fotsiny ianao, dia hahazo mailaka miaraka amin'ny tatitra momba ny angona nangatahina ianao tao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra (amin'ny tranga manokana mety hahemotra hatramin'ny 6 ora).